Dexamethasone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန် - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်သောအားကစား ရပ်ရွာ ကုန်ပစ္စည်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် သတင်း၊ ကျန်းမာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Dexamethasone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်
Dexamethasone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ | သတိပေးချက်များ | အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
Dexamethasone သည်ယေဘူယျအားဖြင့် steroid ဆေးဖြစ်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မတည့်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုများ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ arthritic disorders၊ ပြင်းထန်သောအရေပြားရောဂါများ၊ မျက်စိရောဂါများ၊ သွေးရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ နဗ်ကြောနှင့်ခေါင်းဒဏ်ရာ။
Dexamethasone သည်ပြင်းထန်သော coronavirus (COVID-19) ကူးစက်မှုများအတွက်ပထမဆုံးကုသမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှုတ်ဖြင့်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးအနေဖြင့်ပေးသည်။ မျက်စိအခြေအနေများအတွက် dexamethasone ကိုမျက်လုံးမှိတ်စက်များအဖြစ်အသုံးပြုပြီးမျက်စိထဲသို့ implants အဖြစ်ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖြေးညှင်းစွာဖြန့်ချိခြင်းအဖြစ်အောက်ခြေမျက်ခွံတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုနားအခြေအနေများအတွက်နားကျဉ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
Dexamethasone သည် corticosteroids (သို့မဟုတ် glucocorticoids) ဟုခေါ်သည့်ဆေးဝါးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Corticosteroids သည်အချို့သောအားကစားသမားများအလွဲသုံးစားပြုသည့် anabolic steroids အမျိုးအစားနှင့်ကွဲပြားသည်။ dexamethasone မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့သောဆေးဝါးများသည်အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်ဤဆေးကိုသောက်သည့်အခါအချို့သောဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများရှိသည်။
RELATED - dexamethasone အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Dexamethasone သည်များသောအားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
အရည်နှင့် Electrolyte တွေကိုနှောင့်အယှက်
Cushing Syndrome (ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်)
မျက်လုံးနာကျင်မှု (dexamethasone မျက်လုံးပေါက်မှ)
Bloodshot မျက်လုံးများ (dexamethasone မျက်ခုံးမှ)
မှုန်ဝါး (dexamethasone မျက်စိဆေးထိုးမှ)
ဆေးထိုး site ကိုတုံ့ပြန်မှု
Steroid - သွေးဆောင်စိတ္တ, အရူးသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ
အဆိုပါ optic disc ကိုရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူ intracranial ဖိအား (pseudotumor cerebri) တိုးလာ
အကျိတ် lysis ရောဂါ ကင်ဆာကုသမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါ
ရှားပါးကိစ္စများတွင် dexamethasone ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ကျောရိုးထဲသို့ထိုးသွင်းသည့်အခါမျက်စိကန်းခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ သွက်ချာပါဒနှင့်သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်ခွဲဘဝနှင့်အတူ လေးနာရီ ၂၄ နာရီခန့်အကြာတွင် ၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ dexamethasone ၏ယာယီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သောစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊
Dexamethasone ကိုအရေပြားသို့တိုက်ရိုက်မသုံးပါ၊ သို့သော်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်အရေပြားကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဆေးဝါးရပ်စဲပြီးနောက်တွင်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရနိုင်သည်။ အချို့သောထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုများ, အရေပြားပါးလွှာကဲ့သို့ကုသနိုင်ပါသည်။ ခြယ်ပစ္စည်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်အမှတ်အသားများသည်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပိုမိုပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ဖြေရှင်းရန်အချိန်ယူရမည်။ အရိုးကျိုးခြင်း၊ ရွတ်ပြတ်ခြင်း၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်တောက်တောက်အနာတရဖြစ်ခြင်းများသည်ကြာရှည်ခံပြီးဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်လေ့ရှိသည်။ dexamethasone ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် adrenal မလုံလောက်ခြင်း ဖြေရှင်းဖို့လကြာနိုင်ပါတယ် ။ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့သည်တစ်သက်တာလုံးဖြစ်နိုင်သည်။
Dexamethasone contraindications & သတိပေးချက်များ
Dexamethasone ကိုကျယ်ပြန့်သောဆေးကုသမှုအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အချို့သည်အတော်လေးလေးနက်သည်။ သို့သော်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ယခင်အခြေအနေများရှိလူများတွင် dexamethasone ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
လူသိများသော dexamethasone သို့မဟုတ် corticosteroids ၏စိတ်ဖိစီးမှု
Dexamethasone မျက်လုံး၊ implants (သို့) ထိုးဆေးများကိုလူများနှင့်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုပါ။
မျက်စိ၏ဗိုင်းရပ်စ်, mycobacterial, ဒါမှမဟုတ်ဖန်းဂတ်စ်ကူးစက်မှု
Dexamethasone နားပေါက်ကို -
dexamethasone သောက်သောအခါအခြားအခြေအနေများရှိလူများသည်ပြproblemsနာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
ရောဂါကူးစက်မှု: Dexamethasone သည်ရှိပြီးသားရောဂါကူးစက်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သဖြင့်တက်ကြွသောသို့မဟုတ်ငုပ်လျှိုးနေသည့်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသောလူနာများအထူးသဖြင့်တီဘီရောဂါသို့မဟုတ်မျက်စိ၏ herpes ရောဂါပိုးရှိသူများကိုစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် dexamethasone သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုနှိမ်နင်းသောကြောင့်၊ အားနည်းသောကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုသုံးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးပေးသည့်အခါသတိနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
သွေးတိုး - Dexamethasone သည်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်လာသဖြင့်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုခံယူသောလူများအားပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်ကုသနည်းများကိုပံ့ပိုးသူများကလိုအပ်သလိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဖောက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေများ - Dexamethasone peptic အစာအိမ်နာရောဂါ, diverticulitis, nonspecific အနာ colitis, သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောအူလမ်းကြောင်း anastomosis နှင့်အတူမည်သည့်လူတစ် ဦး အတွက်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဖောက်ထား၏အန္တရာယ်မြင့်တက်။
နှလုံးရောဂါ Dexamethasone သည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်၊ အရည်ကိုထိန်းထားနိုင်မှုနှင့်ဆိုဒီယမ်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ နှလုံးပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
နှလုံးရုတ်တရက်ဖောက်ပြန်မှု: မကြာသေးမီကနှလုံးရောဂါခံစားခဲ့ရသောလူများတွင် corticosteroid အသုံးပြုခြင်းသည်နှလုံးအုတ်ရိုးအတွင်းကွဲပြဲစေနိုင်သည်။
စိတ်ရောဂါ Dexamethasone ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ် ရှိပြီးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုသို့မဟုတ် psychotic သဘောထားတွေ။
အရိုးပွရောဂါ: Corticosteroids သည်အရိုးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ လက်ရှိအရိုးပွရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
ဆီးချိုရောဂါ Dexamethasone သည်ဆီးချိုရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သဖြင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
Myasthenia gravis: dexamethasone နှင့်အခြား corticosteroids များသည် myasthenia gravis အတွက်ပုံမှန်ကုသမှုဖြစ်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးသည်ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။
အလွန်အကျွံသိုင်းရွိုက် အလွန်အကျွံသိုင်းရွိုက်သိုင်းရွိုက်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် dexamethasone ကိုဖျက်ဆီးရန်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းရည်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
အသည်းအသည်းခြောက် အသည်းခြောက်ရောဂါသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ dexamethasone ကိုဖြိုခွဲနိုင်စွမ်းကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားသည်။
ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများ - Dexamethasone နှင့်အခြား corticosteroids သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
dexamethasone ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုမယူဆပါ။ အလွန်အကျွံသောက်ရန်သံသယရှိပါကရောဂါလက္ခဏာမပြသည့်တိုင်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ အန်ထုတ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ dexamethasone မျက်စိပေါက်ခြင်းကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲလျှင်သံသယဖြစ်ပါကဆေးရုံသို့မဟုတ်အဆိပ် helpline သို့ဖုန်းခေါ်ပြီးပုံမှန်ဆားဖြေရှင်းချက်ဖြင့်မျက်စိကိုစတင်ဖြည့်ပါ။
Dexamethasone ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည် steroid ကိုထုတ်ယူ adrenal မလုံလောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ corticosteroids သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ adrenal gland များ၊ သဘာဝ corticosteroids ထုတ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသောကိုယ်အင်္ဂါများကိုထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောဆေးပမာဏသို့မဟုတ်ကြာရှည်အသုံးပြုမှုအပြီးဆေးသည်ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းသွားသောအခါ adrenal glands သည်၎င်းတို့၏ပုံမှန်ဟော်မုန်းကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ စတီးရွိုက်ဆေးမှထုတ်ယူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါလူတို့သည်များသောအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့လာသည့်ဆေးထိုးပေးလိမ့်မည်။
corticosteroid အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည် over-the-counter နှင့်ဆေးညွှန်းလိမ်း steroids အရေပြားမှလျှောက်ထားနှစ် ဦး စလုံးသည်။ Dexamethasone ကိုအရေပြားတွင်အသုံးမပြုပါကအများအားဖြင့်အလွဲသုံးစားမပြုပါ။
Dexamethasone သည်လူကြီးများကဲ့သို့ကလေးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသည်။ အရွယ်ရောက်သူများနည်းတူကလေးများသည်သွေးနှင့်မျက်စိဖိအားများအပြင်ရောဂါကူးစက်မှုလက္ခဏာများ၊ အနာများ၊ ဟော်မုန်းပြproblemsနာများနှင့်အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ Dexamethasone သည်ကလေးငယ်များကြီးထွားမှုကိုနှိမ်နင်းသည်။ အနိမ့်ဆုံးဆေးထိုးရန်နှင့်အမြင့်နှင့်အလေးချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်ဆရာဝန်များကိုအကြံပေးသည်။
dexamethasone ၏မမွေးသေးသောကလေးငယ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာလေ့လာထားခြင်းမရှိသော်လည်း dexamethasone မွေးကင်းစအတွက်ကွဲအာခေါင်စေခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစဉ်အတွင်း ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း dexamethasone ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၏အန္တရာယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဟန်ချက်ညီရန်လိုအပ်သည်။
နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများသည် dexamethasone ကိုမသောက်သင့်ပါ။ Dexamethasone တစ် ဦး သူနာပြုမိခင်ရဲ့နို့ရည်၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာမွေးကင်းစရဲ့ကြီးထွားမှုသို့မဟုတ်သဘာဝ corticosteroid ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။ dexamethasone (သို့) မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးခြင်းကိုရပ်စဲသင့်သည်။
dexamethasone သည်အသက် ၆၅ နှစ်အောက်ရှိလူများအတွက်မည်မျှဘေးကင်းသည်၊ မည်မျှထိရောက်မှုရှိသည်ကိုလေ့လာရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ လက်တွေ့တွင် dexamethasone သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်သတိထားစွာအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးပမာဏဖြင့်စတင်သည်။
Dexamethasone interaction က
Dexamethasone ထိုးသွင်းနှုတ်နှုတ်ယူ, ဒါမှမဟုတ်မျက်စိရဲ့မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားသည်။ နှုတ်အားဖြင့်သောက်သောအခါအစာအိမ်ယားယံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် dexamethasone ကိုအကောင်းဆုံးအစားအစာဖြင့်စားသုံးသည်။ သို့သျောလညျး, စပျစ်သီးသို့မဟုတ်စပျစ်သီးဖျော်ရည်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ Grapefruit dexamethasone ၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းတ္ထုများရှိသည်။ ၎င်းသည်သွေးစီးဆင်းမှုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးပွားစေနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ဆေးများ - နှိုင်းယှဉ်ထားသည် - ကာကွယ်ဆေးအားနည်းသွားလျှင်ပင် dexamethasone ကိုသောက်သုံးသောလူများအားတိုက်ရိုက်ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ပါ။ Dexamethasone သည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုနှိမ်နင်းသဖြင့်အသက်ရှင်သောကာကွယ်ဆေးများသည်ပြင်းထန်သောကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အခြားဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ - အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအချို့ကို Steroids နှင့်မသုံးပါ။ ဤဆေးများတွင် -
Mifepristone , corticosteroids ရေရှည်အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်လျှင်
edurat (rilpivirine)၊ dexamethasone တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးသောက်ပါက
Imlygic (talimogene laherparepvec) အားခုခံအားစနစ်အားနည်းသောလူများအားဘယ်သောအခါမျှပေးသည်။ dexamethasone ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။
အခြားကာကွယ်ဆေးများ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးဆေးဝါးများ၊ Diureticsics, NSAIDs၊ anticholinesterase ဆေးများ၊ CYP3A4 inhibitors and inducers၊ dexamethasone မသောက်မီသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။
1. ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း dexamethasone ယူပါ
သတ်မှတ်ထားသောဆေးကိုသောက်ပါ။ ဆေးကိုတိုး။ မလျှော့ပါနှင့်။ dexamethasone ကိုရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုးဆေးကိုလျှော့ချခြင်းသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်စေပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပါကဆေးကိုမချိန်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးပါ။
2. စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း dexamethasone ကိုယူပါ
အချို့လူများသည် dexamethasone ဆေးကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံမှရရှိလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အချိန်ဇယားတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးထိုးရန်ချိန်းဆိုမှုများအားလုံးကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။
အခြား dexamethasone ပုံစံအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားကိုပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးပြားများသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ဆေးများကိုတစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။ Dexamethasone မျက်လုံးပေါက်သည်တစ်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ထိုးရန်အချိန်ဇယားတစ်ခုရှိပြီးနောက်ဆုံး၌တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သို့မဟုတ်လေးကြိမ်အထိကျဆင်းနိုင်သည်။ နားပေါက်များသည်တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်သို့မဟုတ်လေးကြိမ်ခန့်အချိန်ဇယားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်ရှုပ်ထွေးသောဆေးထိုးအချိန်ဇယားများဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆေးမထိုးရန်သေချာစေရန်နှိုးစက်၊ ဆေးမှတ်တမ်း၊ စမတ်ဖုန်းအက်ပ်ကိုသုံးပါ။
လွဲချော်သောဆေးသောက်ရန်အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆေးကုသမှုအတွက်ဆရာ ၀ န်၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်ပြောဆိုပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသောကြောင့် dexamethasone ဆေးညွန်းစာသို့မဟုတ်ဆေးပေးသည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာပညာရှင်အားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ဆေးဝါးများအပါအ ၀ င်အကြောင်းကြားပါ။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပြproblemsနာများ၊ အထူးသဖြင့်အစာအိမ်အနာ၊ အစာအိမ်အူရောင်ရောဂါ၊ diverticulitis သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကအူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ခြင်း (အူလမ်းကြောင်းရောဂါ)
ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးနှင့်လက်ရှိဖြည့်စွက်ဆေးများ၊ အထူးသဖြင့်ပantibိဇီဝဆေးများ၊ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများ၊ NSAIDs၊
ရေရှည်တွင် Dexamethasone သောက်နေစဉ်ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေရန်အတွက်သွေးပေါင်ချိန်၊ ဟော်မုန်း၊ သွေးသကြားဓာတ်၊ ရောဂါကူးစက်မှုလက္ခဏာများနှင့် corticosteroid အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အခြားပြproblemsနာများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများသည်ကြီးလေးသောပြproblemsနာများမဖြစ်ပွားမီပြissuesနာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ချိန်းဆိုမှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ သေချာအောင်ပြပါ။
၅။ NSAID များကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုရှောင်ပါ
dexamethasone နှင့်အတူသောက်သောအခါ Aspirin၊ naproxen သို့မဟုတ် ibuprofen ကဲ့သို့သော Non-steroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAIDs) သည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပြproblemsနာများ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
Dexamethasone သည်အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောအရေးကြီးသည့်အပြင်အသက်ကယ်ဆေးဖြစ်သည်။ သင်၏ဆေးပြားမှတ်တမ်းနှင့်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားတို့ပါ ၀ င်သည့်ဆေးဝါးများအားလုံးပါ ၀ င်သည့်သင်၏လူတစ် ဦး ပေါ်တွင်ဆေးမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းကတ်ပြားကိုအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ပါ။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျွေးမွေးခြင်းအခြေအနေများအောက်တွင်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများတွင်ပါးစပ် dexamethasone, 4-mg နှင့် 20-mg mg တက်ဘလက်များ၏နှိုင်းယှဉ်လုံခြုံမှု, ဇီဝဗေဒနှင့် pharmacokinetics, အစာရှောင်ခြင်းနှင့် open-label ကိုသုံးလမ်း crossover လေ့လာမှု , လက်တွေ့ Lymphoma, Myeloma, နှင့်သွေးကင်ဆာ
Decadron သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Dexamethasone , Epocrates
Dexamethasone ဒြပ်ပေါင်းများအကျဉ်းချုပ် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Dexamethasone ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ဆေးထိုး, ဖြေရှင်းချက်သတင်းအချက်အလက် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Dexamethasone ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ဖြေရှင်းချက် / သတင်းအချက်အလက်ညွှန်ကြားကျဆင်းသွားသည် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Dextenza သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Ozurdex ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
Steroid တစ်မျိုးထုတ်ယူသည့်ရောဂါ - သက်ရောက်မှုများ၊ etiology နှင့်ကုသမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည် , နာကျင်မှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဂျာနယ်
Viadox သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
သင်၏သိုင်းရွိုက်ဆေးနှင့်ရှုပ်ထွေးစေသောအရာ ၅ ခု
nuvaring နဲ့ tampon ဝတ်လို့ရမလား
ကိုယ်ဝန် ၄ ပတ်အစောပိုင်းတွင်သွေးခဲခြင်း